Su'aalaha la isweydiiyo - Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.
Haa, waxaan u baahanahay dhammaan amarada caalamiga ah inay lahaadaan tirada ugu yar ee dalabka. Haddii aad raadineyso tiro aad u yar, waxaan kugula talineynaa inaad nala soo xiriirto.
Haa, waxaan bixin karnaa dukumiintiyada ugu badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta / Ku -habboonaanta; Caymis; Asalka, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta waxa loo baahan yahay.
Muunadaha, waqtiga hogaaminta waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka baaxadda leh, waqtiga hogaamintu waa 7-21 maalmood kadib marka la helo lacag dhigashada. Waqtiyada hogaamintu waxay wax ku ool noqdaan marka (1) aan helnay deebaajigaaga, iyo (2) aan u haysanno oggolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii waqtiyada hoggaamineed aysan ku shaqeyn waqtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibintaada. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonaa inaan daboolo baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa koontadayada bangiga oo leh T/T, 30% deebaaji hore, 70% dheelitir ka dhan ah nuqulka B/L, ama L/C marka la arko.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan kharash dheeraad ah.